Waxyaabaha waxaa lagu cusbooneysiiyaa seddex shaqooyin cusub oo xiiso leh | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | | Barnaamijyada IPhone
La wax soo saar Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan qofka mashquul badan. Haysashada codsiyo noo ogolaanaya inaan kordhino waxtarka waqtiga aan haysanno iyo inaan xasuusano liiska waxyaabaha aan sugeyno waxay noqon kartaa wado aan ku ilaalino maalinteena. Waxaa jira codsiyo badan, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan ayaa ah Waxyaabaha 3, barnaamijka ku guuleystay abaalmarinta naqshadeynta ugu wanaagsan ee WWDC ee 2017.
Maanta waa la cusbooneysiiyay version 3.4 bilaabida 3 sifooyin cusub: xiriiriyeyaasha, otomatiga iyo wareejinta codsiyada kale. Qalabkan cusub, Waxyaabaha ujeedkoodu yahay inay noqdaan mid ka mid ah astaamaha lagu hagaajinayo wax soo saarka maanta. Boodka kadib waxbadan ayaan kuu sheegi doonaa.
3 astaamood oo cusub oo loogu talagalay barnaamij wax soo saar sida Waxyaabaha
Waxyaabaha Waa mid ka mid ah barnaamijyadan lagu taliyay in loo isticmaalo isticmaale hadda ku bilaabay iDevice. App-ka waxaad ku qorshayn kartaa maalmaha, waxaad ku ururin kartaa fikradaha, waxaad u abaabuli kartaa toddobaadyada si aad u qabato hawlo kala duwan maalmaha oo dhan kor u qaad wax soo saarka. Marka la soo koobo, shakhsiyeeyo habka aan u shaqeyno, ku shaqeynta barnaamij nolosheena wax yar ka fududeyn kara.
Noocan cusub ayaa lagu daray 3 qaabab cusub oo aan hoosta kaagala hadli doono:
Otomaatiga awood badan: Tani waa sida horumariyayaashu ugu yeedheen isticmaalka socodka shaqada, Qalabka caanka ah sida WorkFlow ama Launch Center Pro ayaa hada la jaan qaadaya Waxyaabaha lagu mideynayo howlaha iyo fikradaha aan ku dhex hayno arjiga howlaheena shaqo ee aan maalin walba ugu isticmaalno aaladaha noocan ah.
Xiriirinta: horumariyayaashu waxay soo raaciyeen qaab cusub oo xiriir ah oo ka bilaabmaya waxyaabaha:, si markaa ay u noqoto hab fudud oo loogu kala safro inta u dhexeysa howlaha, faylalka ama liisaska Waxyaabaha ka socda barnaamijyada kale. Xidhiidhyada ayaa laga wareejin karaa hal qalab oo kale iyadoo la adeegsanayo ••• laga heli karo shaashadda dalabka.
Ka dhiib barnaamijyada kale: horumariyayaashu waxay abuureen a maktabada furan Iyada oo ku saleysan Swift, kaas oo horumariyayaasha dhinac saddexaad ay la qabsan karaan codsiyadooda si ay ugu haajiraan waxyaabaha lagu abuuray barnaamijyadooda fikradaha ama faylalka Waxyaabaha, si aan ugu abuuri karno waxyaabo faa'iido leh barnaamijyada kale oo aan ugu gudbin karno aaladda wax soo saarka par heer sare ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Waxyaabaha waxaa lagu cusbooneysiiyaa seddex shaqooyin cusub oo xiiso leh